Oroma okooko osisi Mkpa mmanụ | AromaEasy wholsale mmanụ dị mkpa
gosiri 4.96 nke 5 dabeere na 28 ahịa Fim
Osisi Osisi Osisi Mkpa Essia E120
Ahịa ego 1.89 (USD)
SKU: E120 Categories: 100% Mkpa Mkpa Mmanụ, All Products
N'ogbe Osisi Osisi Osisi Osisi Mkpa Mkpa
Ọcha ikuku na-esi ísì ọjọ
Na-ejide isi oku.
Site na karama ahụ: ụrọ mara mma, nke nwere ifuru, na citrus na-adọrọ adọrọ.
Aromatherapy site na iji mmanụ neroli nwere ike inye aka belata nchekasị, nchekasị, na ịda mbà n'obi na-akpata.
Na-enye mmanụ mmanụ mmanụ n'ụtụtụ iji mee ka mmụọ gị dị elu.
28 reviews maka Osisi Osisi Osisi Osisi Osisi E120
CatB - April 26, 2021
Obi dị m ụtọ na ọ bịara. Ọ na-esi ezigbo mma.
Jessie - March 12, 2021
Ana m asọpụrụ isi nke oroma ma ejiri m ọtụtụ ihe karịrị okpukpu anọ mana ọ bụ naanị m ka ị ga-achọ ihe gbasara 2-3 maka ike ma ọ bụghị karịa ike na-amasị m ịgbakwunye nke a na clary sage iji mepụta nhicha mara mma , na-echebe (nhichapụ ike) na-atọ ụtọ calming senti na-enwe ọ bụla n'oge nke ụbọchị
Nnenna - February 21, 2021
M na-eji nke a dị jụụ ikuku humidifier.It na-esi isi dị ka nke ọma dị ka elu price mkpa mmanụ, ma ọ bụrụ na ọ bụghị mma.
amara - January 30, 2021
okwukwe - January 8, 2021
Nke a na mmanụ na-esi isi soooo ọma. Ana m eji ya na ncha aka m nke ụlọ, ịsa ihu, na-agbasa ma ana m agwakọta ya na mmanụ na-ebu mmanụ na mmanụ ndị ọzọ dị mkpa iji tinye n'ahụ mgbe ịsa ahụ. Hụ mmanụ a n'anya.